Tarikhda Maysooniyada Qaybta 8aad - Land Of Punt
“Talada maysooniyadu waxay taalay London xisaabadkuna ka socdeen. Waxaa laysula wareegay magaalada New York taas oo talis u noqotay maysooniyada intii danbe, iminka waxay wadaan oo ay isugu biyo shubatay in laysla tago magaalada barakaysnay ee Jerusaleem. Maysooniyada waxaa ka go’an in diimaha gaar ahaan Islaamka meesha lagasaaro oo diin uu Dajjaal calanside u yahay oo midaysa dhamaan diimaha soo jireenka ah lagaga dhawaaqo beledka Al-Aqsa”
“Talada maysooniyadu waxay taalay London xisaabadkuna ka socdeen. Waxaa laysula wareegay magaalada New York taas oo talis u noqotay maysooniyada intii danbe, iminka waxay wadaan oo ay isugu biyo shubatay in laysla tago magaalada barakaysnay ee Jerusaleem. Maysooniyada waxaa ka go’an in diimaha gaar ahaan Islaamka meesha lagasaaro oo diin uu Dajjaal calanside u yahay oo midaysa dhamaan diimaha soo jireenka ah lagaga dhawaaqo beledka Al-Aqsa”.
Qoraaladi ugu danbeeyey akhristaha waxaynu kula wadaagnay ka dhextoosidii laga dhextoosay yurub iyo ileyskii ubaxay aqoonyahanka reer yurub qarnigii 17naad. Waxaynu soo qadanay sidii looyagleelay xadaarada yurub kataagan maanta iyo horumarkii ka bilaabmay isla qaaradas hadii ay tahay cilmi saynis, filosoofaro maskaxda u tuujinayey sidii loogu horumarin lahaa xadaaradan ileyska heshay.
Hore inoo wad… Waxaynu usii gudbaynaa tarikhda qarniga 18aad iyo maysooniyadii oo waji kale iyo dariiq casriga cagta saartay iyo heshiisyo saamayntooda leh oo dhacay 18aadkii ilaa qarnigan 21aad. Tarikhdu markay ahayd 1898 ayaa lagu dhawaaqay ururka looyaqaan Sahyuuniyada (Zionism) magaalada Vienna, waxaa la asaasay garabka siyaasada ee hadafkiisu yahay in gacanta yahuuda lagu soo celiyo dhulka barakaysan. Dhuumashadii iyo jaan-goyntii (strategy) u qarsoonayd ee kama danbaysta ahayd ayey lasoo baxay krusaydarkii sadexaad oo casriya ayaa bilaabmay.Waxay 500 sano ayey fadhiyeen London oo bartaa dunida uga soo talinayeen oo dunida inteedakale ku haysteen dhaqaale iyo cilmi baadhis. Ingiriisku wuxuu ahaa umulisada dunida keentay Isreal. Waxaa dalka ingiriiska lagu gudoonshay in la dhiso dawlad qoomiyada yahuuda ugaara oo iska leeyin. Waxaana arinkaa la go’aamiyey wakhtiga udhaxeeya 1916-18 oo ku beegan markii ingiriis ku guleystay inuu wadama muslimiinta ka adkaado iyagoo isticmaalay dagaal wakhtigaa casriya oo maraakibta lagu dagaalamayo waxay awood kulahaayen badda ingiriisku wakhtigaa. Dhacdadaa lagula wareegayo Falastaan iyo Jerusalem waxaa ku wadasocday Fransiiska oo iska qaatay wadama jaarka la ah Falastan iyo Ingiriis oo ahaa ka isagu hawsha wata.
Waxay kala saxeexden heshiis qarsoodiya “Sykes–Picot Agreement” inaan lay sugu iman dalkasta intaa qabsaday hadii col dibada ahna yimaado layska kaashado. Sidaa saa loogu xalaaleyey raalina kaga ahaayen wadamadii kale ee awood ciidan mesha ujoogay ingiriisna unoqday cida mandayt u haysata ilaalin iyo wareejinta dhulka barakaysan iyo Jerusalem. General Allenby oo ahaa sarkaalkii qabsaday Jerusalem waa kii lahaa iminka uun buu istaagay krusaydarkii, wuxuu tixraacayey krusaydarkii koobad iyo kii labaad ee lagu qabsaday isla dhulkaas qarniyadii ka horeeyey. Isla sanado gudahood ayuu xoghayihii ingiriiska “Arthur Balfour” Paris kaga dhaqaaqay heshiiskii caanka noqday “Balfour Declaration” ee yahuuda lagu siiyey dhulka barakaysan iyo magaalda Jerusalem.
Wakhtigaa dunida ingriisku ka talinayey ee maysooniyadda shukaanta uhaysay siyaasada dalka ingiriiska waxaa loo bixiyey Pax Britannica. Pax micne ahaan waaa NABAD, lakinse meesha nabadii ma’ool qoricaaradii ayaa wax lagu waday. Wixii ka danbeeyey isla dhacdadaa lagu wareejiyey Jerusalem maysooniyadu xafiiskii siyaasadda waxay urartay mareekanka waxaan halkii umulisada Oxford waxaa badalay askari qorisita oo gaadh ka haya koritaanka Isreal. Wakhtigaa mareekan talada dunida la wareegay iyo maysooniyada oo caga dhigatay New York loo bixiyey Pax Americanna.
Sir, Lacag & Awood…Maysooniyadu dunida waxay u qorsheeyen inay labo siyaaboodba ugu haysan karaan hogaanka hadii ay u hirgasho; mid waa dhaqaalaha dunida kasoo baxa siiba khayraadka oo ay maamulan iyo in awood cidaan oo dunida lagu cabsi galiyo lasameeyo.Labadaa waji ee ay hindiseen ilaa iminka way ku guuleysteen oo dhaqaalihi dunida isla ururkaas iyo madaxdooda ayaa gacanta ku haya, isla dhaqaalaha ayey ku sameeyen dawlado aan loo babac dhigi karin oo cidankooda wata. NATO ayaa qaabilsan wixii maquunin ah. Waxay noqdeen ururka ugu saamaynta badan kana soo dhexbaxaan shakhsiyaadka dunida ugu taajirsan uguna caansan intii ingriis lawada socday.
Qarnigaa 17-18aad dhaqaalaha oo kasoo gala doonyaha ukala goosha qaaradaha waxaa iska lahaa maysooniyada waxaan kamid ahaa shirkada/markabka EAST INDIA COMPANY (e.g. DP & P&O) iyo dhamaan maraakibtii daad guraynaysay dadka madmow ee laga raafayey qaarada afrika “SALVERY”. Waxay go’aamiyeen inay gacanta ku hayaan dhaqalaha iyo lacagta dunida shilin iyo xaashiba oo ay daabacan cid kalena loo ogolaan, taasuna waxay keentay inay noqdoon tujaar aan dabadood lahadlin wadamada farta ugu yeedha. Shirkadaha lacagta (xaashida kaladhka marsan) sameeya sida American Banknote Company (USA), Thomas De La Rue (UK), Giesecke, Devrient Consortium (Germany) waxaa dhamaantood iska leh maysooniyda. MAGIC, MONEY & POWER. Lacagtan warqada ka samaysan waxay dunida ku haysteen 100 sano oo iminka dhamaadkisi lagu jiro tarikhdana raacay Pax Americanna. Waxay inoo hindiseen oo u qorshaysan in 100ka kuxiga nadaam cusub looga sii guuro naadam dhamaystiran oo ka casriyaysan Pax Britannica iyo Pax Americanna. Wuxuu noqondoona nadaam ciidan aan hore dunida loogu arag oo dhisan wata. Waxay qorsheeyen in nadaamkan cusub yeelandono lacagta elektroniga iyo systemkii ay ku shaqayn lahayd. Waxaa miiska saarnaa 20 sano ee ugu danbeeyey in hawada laga saaro lacagta xaashida ka samaysan “fiat currency” laguna badalo lacag casriga oo elektroniga ah oo aan cidba arkayn meel ay marayso iyo cid maamulaysa waxayna u eegtahay inay himilada maanta gaadhen.Nadaamkan loo gogol xaadhayo aqoonyanka dunida saamaynta kuleh waxay isla qaaten inuu yahay dawlad ku sheega Isreal, Pax Judeica.
Waxay soo bandhigeen in cida kaliya ee nadaam cusub inay dunida ku maamusho wada inbadan way aytahay dawlad Isreal. Waxaa la aminsan yahay in mustaqbal Isreal dunida laga maamulidono oo ay yahuudu noqdaan awooda kama danbaysta ee dunida waxu yeedhisa. Waxaa laysku xidhiidhshay arimihii tarikhda fog soo jiitamayey khasatan dawlada ingriiska iyo mareenkaba wadeen ee ay ka midhodhalinayeen sidii loogu guulaysan lahaa. Waa arinka aanay fahmin wali alankaa aqoonyahanka reer galbeedku ee ay iswaydiiyan waa maxay sababta xadaaradii ay dhigteen ee ku saleysnay cilmaaniyada ku mushquuliyey dhulkan yar ee laysku haysto. Waxan soogalay ee ka afduubay siyaasadii iyo dhaqaalahoodi dalalkooda lagu horumarin lahaa ayey fahmikari waayeen iyo muhiimada magaalada Jerusalem. Pax Judeica…Intaan hogaanka dunida lagu wareejin Pax Judeica waa in qorsheyaasha larabo diyaar ahaadan.Ururka maysooniyada wuxuu ka midyahay ururada/kooxaha sida weyn u aminsan soo bixista Masiixul-Dajjal.
Taarikhda inoo soo jiitamaysay meelo badan ayeynu kagasoo sheegaynay u gogol xaadhista Dajjal Cawar iyo qorshe uu doonayo inuu markaliya dhextooso magaakada Jerusalem waxaana inoo xoojinaya mawduuca xadiisyada ku soo arooray akhrizamanka iyo Dajjal.Xertan maysooniyiinta ee horkacaysa Dajjal; waxay ku dagalaaman dhaqaale iyo awood ciidan. Waxayna gaadhen heer aan si yar oo fudud loogu degdegin. Lacagta looyaqan “fia currency” waxaa bedalay lacag elektonig ah “Krypto-Currency” oo noqonaysa lacagta cusub ee Dajjal dunida ku maamulidono akhri-licibka kama danbaysta intaan Nabi Ciise Ilahaahay keeni. Intaan lagusoo dayn bulshada dhexdeeda lana bilaabin in toos wax loogu kala iibsado lacagta elektroniga ah tijaaboyin ayaa laga qaaday waxaana lagu waday daraasad iyo macluumad ururin 30 kii sano ee inasoo dhaafay.30 sano waxaa la eegayey siday bulshadu ula qabsato iyo inay aqbalidoonto nadaamkan cusub. Waxaa daraasad mugleh lagu dhamaystiray isticmaalka nadaamkan elektroniga oo meel layska dhigay in wixii cilad ah la tiro oo aan hadhow laysweydiin khalad ku yimaada farsamadan cusb ee dunida lagusoo wado.Bal kasoo qaad lacagaha inoogu jirta ZAADka iyo Somtel markaliya khalkhal kuyimaado oo meeshaba ka bax so madaxa layslama galeen? yaase looracaya lacag aanad cadayn karayn meel ay jirto ama taalo? Waxaan si kalsooni leh ku jirto u odhankaraa in shirkadaha gacanta kuhaya nadaamkan cusub ee lasoo wado inagu tijaabiyeen systamka “cashless society” oo laynagu soo dhextuuray daraasad ahaan sida uu ushaqayn lahaa elektronig system si hadii loogu guulaysto loogu gudbin lahaa dunida horumartay sida wadamada Yurubta, Jabaan iyo South Korea ilayn lama odhankaro way samaysankari waayen nadaamka Elektroniga ah wadamadaa horumaray teknoloji ahaan. Barakaad iyo shirkadaha lamidka ah ee soo xawilay lacagtan hawada maraysa inay yihiin maamulo shaqo u haya shirkado waaweyn oo dunida saamayn weyn ku leh sida Apple, Microsoft iyo shirkadaha lamid ah ee freemaysanku leeyahay shaki kuma jiro waxaana calanside u ah nadaamkan lacagta cusub ee ladoonayo in dunida lagu maamulo Isreal iyo xulafada isxambaarsan ee ay wadasocdaan. Lakinse waxaa suurtogal ah inanay ogayn shirkahda soomalidu arinka ay xambarsanyihiin.
Bill Gates Somaliland bilaash uma amaanin. Hadalka kaliya ee uu u yidhaahdo ama kusoo hadalqado shirkad gacansi ama dawlad waxaa lagu siista malaayiin dollar. Markuu Telesom amanayey umalaynmaayo inayba ka warhayeen lakinse uun wararka ka maqleen inuu Bill Gates amaan kula dul dhacay. Waxaad maragmadoona in dunidii maanta loodiyaarshay u guurista lacagta hawada maraysa iyo “Krypto-currency” oo ay iminka hormood kayihiin Bitcoin, lidcoin iyo mustaqbalka Zaadcoin in lahelo. Hadafka maysooniyadu waa in la hirgaliya isticmaalka lacagtan mala-awaalka ah ee bilaa xisaabadka ah. Cidii u hogaansanta nadaamkan Dajaal waxaa loo fududaynayaa arinka kasta oo dunida lataaban karo ku xidhan dhaqaale helis, siyaasad, magaca iyo maamusba.
Lakinse cidii ka hortimaada ma lajaanqadi maysooniyada iyo ciday wataan dagaal aanad garanayn meel alaale iyo meel uu kaaga socdo ayaa ku qabsanaya. Waxay yaqanin dagaalada qarsoon kunadhufo kana dhaqaaq. Dawladan cusub ee Layna hoos wado Isreal waxaa laguu ilaalinaya ciidan xoogan oo Isreal iska leedahay waana dunida wadanka ugu ciidan mashquulsan iyo cududa “NATO” ayaa barbar socda dawlad Dajjal. Maysooniyada waxaa u qorshaysan aadna iminka saadasheedi u muuqata inay la burburiyo mareekan iyo dawlada kale ee awooda leh. Caadiyan taarikhda waxaynu ku haynaa amase aynu odhankarnaa in Pax Britanicca ay badashay Pax Americanna oo waliba ku badashay xaalad dagaal. Shaxda utaal maysooniyada uguma ay jirto in laba dawladood oo isku awooda ay dunida kusoo baxaan waayo, danahooda ayaa iska hor imanaya, waa tan keentay inay wajiga labaad ee Dajjal arimaha laga fuliyo Ameerika Ingiriiskana gadaal loo yara dhigo.
Si markaa loo helo oo isbadalka la kala tirsanaayo hogaaminta dunida waa in marxaladii arinkaasu ku fulayey la diyaarsha. Taarikhda rasmiga ah ee dunida lagu hayo waxay inoo tilmaamaysa in dagaalada dunida ka dhacay sida WW1 & WW2 qorsheysnaa oo lasii diyaarshay marxalad u saamaxaysa inuu dhaco. Inakoo taana ka duulayna, waa in dhaqaalaha dawlad mareekanka dhulka lagu dhuftaa oo aanay yeelan lacagtan adag ee mareekan dunida ku haysto. Waxay kaloo maysooniyadu qorshaysay sida kaliya ee awooda ciidan ee mareekan meesha looga saar kara ay tahay iyada oo dagaal lagasho oo awoodaha kale ee dunida ka jira laysku dhufto sida China iyo Ruushka. Dabadeed bartaa kasoo dhexboodo Pax Judeica ka faa’iidaysato.
Maysooniyadu waxay is tuseen siyaabaha loo kantorooli karo ee meel qudha laga hagi karo dunida badankeeda waa in qaarad kastaba is raacada samaysataa siyasad ugaara oo ku xidhan xafiiska Maasooniyadda. Qaramada midoobay. Waa inay lacag midaysa leeyihiin, sidaa si leeg waa inay laysu soconkaraa oo xuduudaha la khafiifiya iyo inay samaystaan ciidan isku dhafan oo nabada ilaaliya. Afrika gaar bay isugu toleen, yurub waa lays raaciyey, Waqooyiga ameerika dhinac baa laysugu didiyey kuwooda israaci kara. Asia iyadana waa laysu didiyey oo wadamada isku aragtida ah baa lays raacshay.